Muxuu Zidane Ka Yiri Guul-darradii Qadhaadhayd Ee Villarreal U Xambaarisay Iyo Culayska Saaran?Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Muxuu Zidane Ka Yiri Guul-darradii Qadhaadhayd Ee Villarreal U Xambaarisay Iyo Culayska Saaran?Sawiro
Published on January 14, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(14-1-2018) Tababare Zinedine Zidane ayaa ka hadlay guul-darradii lama filaanka ahayd ee kooxdiisa Real Madrid loogu xambaariyey garoonka Santiago Bernabeu, taas oo Villarreal ay daqiiqadihii 87aad kaga carartay gool aad u qurux badnaa oo weerar rogaal-celis ah.
Zidane oo warbaahinta la hadlay markii ay ciyaartu dhamaatay, ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisu si fiican u ciyaartay oo aanay u qalmaynin inay kharaarto, waxaana uu qiray ka quusteen horyaalka, laakiin ay diiradda saari doonaan inay si fiican u ciyaaraan.
“Umaanaan qalmaynin guul-darradan, sababtoo ah, si fiican ayaanu u ciyaarnay, fursado abuurnay, laakiin waxaanu iska qaban kari weynay weerarka rogaal celiska, taas oo dumisay ciyaartoyga.” Sidaas ayuu yidhi Zidane.
Waxa uu xusay inay tani dhaawac ku tahay kalsoonida ciyaaryahannada, laakiin ay ku dedaali doonaan inay ciyaaraha soo socda si fiican u waajahaan, marxaladdan adag ee ay ku jiraanna ay kaga gudbaan aragti hufan.
Dhinaca kale, waxa uu qiray in wakhtigu ku xun yahay, isla markaana ay quus ka taagan yihiin horyaalka sannadkan, waxaanu yidhi: “Waxaanu ognahay in xaaladdu sii adkaanayso maalin kasta, markaa kama fikirayno horyaalka, kaliya ciyaarta xigta ayaanu ka fikiri doonaa.”